Montreal Convention: ny United Airlines dia tsy maintsy mandoa mpandeha miantona 250 $ 5700 isanisany?
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Montreal Convention: ny United Airlines dia tsy maintsy mandoa mpandeha miantona 250 $ 5700 isanisany?
United Airlines tsy miteny intsony. Ny fifanarahana fampiraisana ny lalàna voafaritra ho an'ny fiaramanidina iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, fantatra amin'ny anarana hoe Fifanarahana Montreal dia mety mitentina Dolara iray tapitrisa mahery amin'ny United Airlines. Tsy nanana hevitra ireo tompon'andraikitra amin'ny kaompaniam-pitaterana taorian'ny mpandeha 250 United Airlines nandeha fiaramanidina avy any Newark ho any HongKong no nataon'ny manampahefana kanadiana ho takalon'aina. Tny azy notaterin'ny eTurboNews on Alahady.
Raha ny filazan'i Paul Hudson dia mety ho eo amin'ny kaompaniam-pitaterana ny andraikitra. Hudson dia filohan'ny Flyersright.org ny tarazo 17 ora mipetaka amin'ny sidina United Airlines Flight 179 any Newfoundland noho ny olana mekanika dia tokony ho anton-taratasy ho an'ny fanonerana tara araka ny Fifanarahana Montreal 1999, izay mifehy ny dia iraisam-pirenena, ny filohan'ny FlyersRights.org.
Ny Montreal Convention 1999 (MC99) dia mametraka andraikitra amin'ny seranam-piaramanidina raha toa ka maty na maratra ny mpandeha, ary koa amin'ny tranga fanemorana, fahasimbana na fahaverezan'ny entana sy entana. Mampivondrona ireo fitondrana fifanarahana iraisam-pirenena isan-karazany manarona ny andraikitra amin'ny zotram-piaramanidina izay nitombo tampoka nanomboka ny taona 1929. MC99 dia natao ho fifanarahana tokana sy iraisan'ny rehetra hitantanana ny adidin'ny seranam-piaramanidina manerantany. Vakio manontolo Lahatsoratra MC99 (Pdf)
Araka ny Andininy faha-19 amin'ity fifanarahana kely fantatry ny besinimaro ity izay tsy tian'ireo seranam-piaramanidina sy governemanta maro ho fantatry ny besinimaro dia tompon'andraikitra amin'ireo zotram-piaramanidina ny zotram-piaramanidina ka hatramin'ny 5,700 $ eo ho eo. Mba hisorohana ny trosa dia tokony hanaporofo ny kaompaniam-pitaterana fa nandray ny dingana rehetra izy mba hisorohana na hanalefahana ny fahatarana. Ny fananana fiaramanidina mendrika no andraikitry ny kaompaniam-pitaterana.
Raha ny filazan'Andriamatoa Hudson dia mety nanambara fa maika ny kapiteny ary izany dia namela ny mpandeha hilentika na inona na inona lalàna mifehy ny fifindra-monina Kanadiana.
Tsy namaly ny United Airlines eTurboNews, saingy araka ny fanambarana iray nataon'ny Wall Street Journal, dia nilaza ny mpitondra tenin'ny United United fa ny orinasa dia mikasa ny “hijery ny lafiny rehetra amin'ity fanodinana ity hahafantatra izay azontsika atao tsara kokoa.”
Ny fampahalalana momba ny fliyers kanan dia azo jerena ao amin'ny 1-877-FLYERS-6 na amin'ny alàlan'ny mailaka [email voaaro] or [email voaaro] tsy andoavam-bola.
Maninona i India no toerana lavorary hitetezana volombava
Nahazo vaovao miarahaba antsika ny fizahantany Zimbaboe raha ao anaty krizy